Resipeo mora - Bezzia | Bezzia
Cook Izy io koa dia hetsika ilaina sy afovoany amin'ny fiainan'ny fianakaviana, fialamboly milalao ho an'ny vehivavy maro. Vitsy ny zavatra manome valisoa toy ny fandrahoana zavatra ary avy eo mankafy mihinana azy. Iray ihany ny singa iray izay manohitra ny vehivavy amin'ity lafiny ity: ny fotoana.
Izany no antony mahatonga antsika ao Bezzia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fanaovana lovia tsotra izay, miaraka amin'ny fotoana fohy hanomanana, dia mety amin'ny sakafo tsara. Noho izany ao amin'ny fomba fahandro mora Andao ampidirina ao daholo ireo lovia azo alaina ao anatin'ny fotoana fohy ary matsiro.
Manasa anao izahay hahafantatra ireo fomba fahandro ireo ary afaka manamboatra sakafo matsiro ao anatin'ny fotoana fohy.
Handravaka ovy natono sy voatabia serizy
Tena tianay ireto laoka ao Bezzia ireto izay azo ampiarahina amin’ny sakafo rehetra, na hena na trondro, na anana...
Quick poara sy osy fromazy quiche
Ny quiches dia mofomamy mamy miaraka amin'ny fototry ny mofomamy fohy ary feno atody sy crème fraîche ...
Porridge miaraka amin'ny amandy sy crème banana
ny Maria vazquez hace 7 volana .
Mila hevitra ve ianao hamenoana ny sakafo maraina? Ao Bezzia izahay dia mino fa ny buborridge ary indrindra manokana ireo bubur ireo amin'ny crème de ...
Atody voadio miaraka amin'ny serizy
ny Maria vazquez hace 10 volana .
Ny atody vaky dia lovia nentim-paharazana ao an-dakozia. Ny iray amintsika izay tia mankafy ...
Manaikitra ovy sy zucchini voaendy
ny Maria vazquez hace 11 volana .
Ny kaikitry ny ovy sy nyoka dia manasa anao izahay hiomanana anio toa safidy tsara ho an'ny ...
Voanjo kanelina voatavo
ny Maria vazquez hace Taona 1 .
Mitady sakafo maraina hafa amin'ny faran'ny herinandro ve ianao? Ity sakamalaho voatavo sy kanelina ity dia safidy tsara ho an'ny ...
Oatmeal sy crème amandy amin'ny alina
Mety mbola tsy naheno ilay teny hoe alina fotsiny ianao, ary tsy ilaina koa! Teny izay matetika ampifandraisina amin'ny ...
Mofo haingana tsy misy fametahana
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanandrana an'ity mofo haingana ity izahay nefa tsy nopetahana. Mofomamy misy potipotika be dia be azo hanina ao ...
Holatra sy sakamalaho frittata
Misy ny fomba fahandro lasa wildcard hanomanana sakafo tsotra sy fisakafoanana hariva. Ny frittata dia iray amin'ireo ...
Laisoa sy crème paoma
ny Maria vazquez hace 2 taona .
Oktobra dia iray amin'ireo vanim-potoana ankafizinay indrindra amin'ny legioma betsaka omen'ny zaridaina….
Yogurt miaraka amin'ny paiso sy pistachios
Ny yaourt miaraka amin'ny paiso sy pistachios izay arosonay aminao anio any Bezzia dia mety ho lasa sakafo maraina faran'ny herinandro ...